Sida loo Hayso Tools Your Garden ee Qaab Great - Shiinaha Richina
Sida loo Hayso Tools Your Garden ee Qaab Great
Waxay jecel yihiin inay beerta? Iyada oo beerta jecel yahay maalmahan, ma jiraan backyards badan oo aan ugu yaraan hal balastar, dheriga, ama weelka wax sii kordhaya waxa ku jira. Laakiin badan tahay, aad bixinta badan oo fiiro gaar ah u dhirta iyo ma aad u badan si ay u qalab aad isticmaasho si ay u koraan. Trowels, hoes, majarafadihii, iyo majarafadihii qaato badan oo xadgudub lagu guda jiro xilli sii kordhaya, iyo haddii aad qaadato waqti yar si ay u jecel yihiin, ay si fiican u shaqeyn doontaa oo muddo dheer aad loogu talagalay.
Ka hor inta aan ka hadlo qalabka beerta aad horay u leeyihiin, xusuuso marka aad gadaneyso Tools Gardening cusub oo qarash badan oo ku saabsan qalab tayo sare leh idinka badbaadin doonaa murug iyo lacag mustaqbalka fog. Bixi yar oo dheeraad ah aalad in uu socon doono, halkii qalab cheap in duugoobi doonaan oo u baahan in si joogta ah loo bedelay. Ka dibna u isticmaali habboon! Sida Hadalku tagaa, marka aad leedahay oo dhan waa dubbe, wax walba oo u eg dhidib-laakiin isticmaalaya qalab loogu talagalay wax aan loogu talagalay in lagu sameeyo waa hab si degdeg ah u dhaawici ama u burburin (iyo xitaa naftaada yeelin ee geedi socodka) . majarafad A dheer-maareeyay ma aha Bir ah, xagga dambe ee faas ma aha dubbe gaadhi hadhuudh ah, iyo pruner gacan aan loogu talagalay in lagu arkay iyada oo loo marayo laanta hal inch ah. Haddii aad u baahan tahay in ay wax ka qaban qabtay shixnad aad hadda qalabka ma aha ilaa, tixgeli inaad iibsato wax haboon, amaahashada ka saaxiib, ama kiraysanayso mid saacado yar (xal fiican u qalab qaas aad inta badan ma u baahan doontaa).
Marka aad leedahay go'an of Tools Gardening wanaagsan, halkan waa 6 siyaabo fudud si ay u ilaaliyaan, laga bilaabo kaydinta!
Them badbaado leh u keydi
Hoosada A waa saaxiib fiican qalab sababtoo ah ka dib markii si xun u isticmaalka, tirada cadowga ka mid ah qalabka waa gaadhista canaasiirta. Sida laga yaabaa inuu ka tago qalab aad halkaas oo aad u baahan doontaa berrito (ama todobaadka soo socda), don`t samayn! Ku kaydi qalabka oo dhan ee ah Hoosada, garaashka, ama xataa unug kaydinta qalab weatherproof soo baxay beerta (boostada miyiga ka dhigaysa a qabtay shixnad weatherproof weyn u qalab gacanta), oo waxay ku dhamaan doontaa marar badan ka sii dheer tahay qalab in waqti ku qaataan ee qorraxda, roobka, dabaysha iyo (ama aad ku qarsoon cawska dheer ka dibna aad u ordaan in ka badan).
kaydinta Outdoor waa xun loogu talagalay gacanta alwaax, kaas oo roughen karo, crack, kala, dunta, iyo waxa qudhmay oo muddo. Meesha ku haboon qalab-kaydinta ilaaliya qalab aad ka cimilada laakiin u oggolaanaysa in wareegga hawada, sidaa darteed qalab qalajin karaa iyo miridhku iyo caariyaysi, waa yar tahay in ay dhacaan.
Them Hayso Nadiifi
Ciid heysta qoyaan iyo dhiiri miridhku, sidaa gelinaya qalab aad iska nadiif ah ka caawin doona in ay muddo dheer. In sidoo kale hab fiican si looga hortago gelinno ee xididdada weed iyo miraha ama cudur ciidda ka dhasha in la wareejiyo meeshaad. Ka hor inta aadan iska fogeeya qalab aad, ku dhaq off ciidda kasta, ama waxaa xoqo off mindi Putty ah (mid kasta oo ka mid ah meelaha aad kaydinta qalab sii). Isticmaal calal ah (wax yar iyo betroolka ah, haddii loo baahdo) si loo soo saaro dheecaan dhirta iyo Beeyada ka jarida qalabka. Qallaji qalabka loo nadiifiyo, gaar ahaan biraha kasta iyo qaybo ka samaysan alwaax, la calal wax dhuuqda.
Looga hortago faafidda Cudurka
Haddii lagu qalab dhirta cad buka shaqeeya, qoynin qalabka aad nadiifiyaa in xal qeybtii xoq aalkolo iyo badh biyo ah shan daqiiqo ka hor qalajinta qalabka iyo iyaga kaydinta dilo jeermiska kasta.
Samee Them Sharp
kariya wanaagsan Most ogaadaan qiimaha of mindi af badan, laakiin sida badan beeralayda ay ogaadaan in qalab fiiqan dhigi hawlaha beerta dhaqso, fudud, iyo mararka qaar xitaa roon dhirta? ILAALI laayeen wanaagsan on hoe ama gacanta pruner ah waa wax fudud, wuuna idin badbaadin doonaa waqti mustaqbalka fog. Ha sugin ilaa aad aalad waa caajis: fakar fiicneeyay sida maalin walba floss for qalab aad!
Ku bilow by eegaya cidhifka jirridda. qalab badan oo ay si siman hal dhinac oo aaqirkii (beveled) dhanka dambe; qalab kale waxaa xagalka ah ee labada dhinac. Sidoo kale dhawrtaan xagal ka mid ah "qeebta." Ma af badan oo khafiif ah sida mindi ama waa uun ku laayeen aad u afaysteen xagal badan oo af beesho? Ujeedadaadu tahay si ay u ilaaliyaan qaabeynta asalka ah.
Qaybo ka mid Baby The Birta
qalabka biraha badankoodu waxay ka faa'iidaysan daahan khafiif ah oo saliid ah si looga hortago in miridhku, tahay haddii ay ka samaysan bir, taas oo ah difaaca jirka, waxa uu. Ka dhig qasac oo saliid ah linseed in aad qalab ku daatay oo ay la socdaan calal jilicsan, iyo siiyaan qalab aad nadiifiyaa deg deg ah oo hal mar ka badan ka hor inta iyaga iska fogeeya. Fadlan don`t saliid motor isticmaalka on qalab aad! Badan oo ka mid ah buugaagta beerta weli ku talinaynaa, laakiin ha aad dhabtii doonaysid in la gelinaya saliid motor galay ciidda beerta fiican? Runtii waxaan don`t.
Haddii aad aragto miridhku kasta, burush isticmaasho silig ama maro Emery (sort of sida ciddiyo xoqe negaanaya maro halkii kartoon oo loo isticmaalo by alxanlaha a) inaad ka saartid. Waxa kale oo aad u salaax karo ciid dufan leh. Ka dhig baaldi adag full of ciid qoyan saliid aad daadisay, iyo kaliya si indho la'aan qalab nadiifin galay cammuudda dhawr jeer. Taasi waa sida caadiga ah oo dhan waxa ay qaadataa si ay labada polish iyo saliid qalab aad waqti isku mid ah.
Xaaladda ka qabtaa Wooden
Marmar koolo khafiif ah oo saliid ah linseed si ay u qalalaan, gacanka alwaax unpainted iyo maalinta ku xigta buff off xad-dhaaf kasta oo la calal nadiif ah. xamili A xun weathered kor u qoynin doonaa xoogaa saliid ah ilaa xad, si dar daahan khafiif ah maalin kasta ilaa ay jirto in yar oo saliid ah oo ka tagay dushiisa maalin ee soo socda. Haddii aadan heli karin saliid linseed dukaanka a hardware maxalliga ah, u jiheysan aad dukaanka cuntada dabiiciga ah ee degaanka. saliid Flaxseed in aad la kariyo la waa wax la mid ah sida oil- linseed "lin" sida ku sugan "linen," fiber ka linen la sameeyey. Tani waxay sidoo kale waa hab fiican si aad u isticmaasho ilaa kasta oo saliid flaxseed jir in aad jikada in uu sameeyay dhadhan ah off.